Akwụkwọ ndetu dị ọnụ ala. Kedu nke a ga-azụta?
Ugbu a akwụkwọ ndetu bụ usoro kachasị ọhụrụ ma a bịa na laptọọpụ. Ogo ha dị ntakịrị na ọnụ ala dị ọnụ ala na-eme ka ha bụrụ nhọrọ mara mma maka ndị na-achọ laptọọpụ dị ọnụ ala. na ha nwere ike iburu ebe ọ bụla n'ụzọ dị mfe.
Akwụkwọ ndetu ebutela ndị mmadụ ọhụrụ n'ahịa laptọọpụ bụ ndị kwenyere na ha enweghị ike ị nweta laptọọpụ. Mana akwụkwọ ndetu ọ bụ nhọrọ ka mma karịa laptọọpụ ọdịnala?
1 Ntụnyere akwụkwọ ndetu dị ọnụ ala
5 Laptọọpụ VS akwụkwọ ndetu
6 Ihe ndị ọzọ gbasara akwụkwọ ndetu
6.1 Ọsọ abụghị ihe niile
6.2 Ebee ka CD dị?
6.3 Hard Drive ma ọ bụ SSD?
6.4 Ihuenyo na nha
7 Mkpebi gbasara akwụkwọ ndetu ọnụ ala
Ntụnyere akwụkwọ ndetu dị ọnụ ala
N'isiokwu a, anyị na-enyocha uru nke akwụkwọ ndetu ma nyere gị aka ịhọrọ nke kacha mma maka gị. N'okpuru ebe a, anyị na-akụrisị ihe anyị chere na ọ bụ akwụkwọ ndetu kacha mma dị ọnụ ala, kọmpụta site na ihe ka ukwuu gaa na obere ọnụahịa.
Lenovo Yoga 310 bụ eze akwụkwọ ndetu dị ọnụ ala. Ọ bụghị naanị na ọ nwere ezigbo ihe nrụpụta na ngosipụta ezi uche dị na ya, mana ọ na-ebukwa ihe nrụpụta ike dị ịtụnanya, kaadị eserese dị mma, yana ntụgharị.. Mana ọ bụkwa na batrị ya were ihe karịrị awa isii mgbe anyị nwalere ya, nke dị mkpa ma ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ n'èzí ụlọ.
Ọ bụrụ n’ịgbakwụnye na ọnụ ahịa ihe na-erughị euro 400, ị ga-ekwenye na anyị na nke a bụ ezigbo ịzụrụ onye ọ bụla na-achọ laptọọpụ nke ọ ga-eji chọgharị ịntanetị, lelee vidiyo na-enuba wee jiri igwe nrụpụta okwu dee. Na mgbakwunye, ọ dị mfe ịchọta ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ọnụahịa, yabụ ọ bụrụ na ị hụ na ọ dị oke ọnụ, chere ntakịrị n'ihi na ọ ga-agbadata ọnụahịa ọzọ n'oge dị mkpirikpi.
Ọ bụrụ na ibu ibu abụghị ihe kacha gị mkpa, laptọọpụ Asus UX370UA nwere ike ịbụ nnukwu nhọrọ.. Ọ nwere ihuenyo HD zuru oke, kaadị Intel UHD Graphics na processor Intel Core i7-10210u (Cache 4M, 2.7 GHz ruo 34.2 GHz) emana ikpeazụ.
Na 1,1kg ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mfe, ma na-atụle arụmọrụ ya - nke gụnyere 8GB RAM na 512GB SSD - ọ na-esiri ike mkpesa.
O nwedịrị imewe mara mma na nke ukwuu. Ị nweghị ike ịga nke ọma na Asus UX431, karịsịa na-efu ihe dị ka euro 800.
Stream HP bụ azịza dị ọnụ ala nke HP maka Chromebook. Ọ na-efu naanị euro 260 wee bịa na 32GB eMMC nke nchekwa, yana ohere nke ịgbakwunye otu afọ nke Microsoft Office 365 etinyegoro na 1 TB nke. Otu nchekwa draịva (nke na-efu ihe dị ka euro 80), nke na-eme ka ọ bụrụ nkwekọrịta dị egwu.
Ọrụ ya karịrị ihe ezi uche dị na ya, na mgbakwunye, ọ bụrụhaala na ị naghị achọ nnukwu ihe, n'ezie. Ọ dị mma maka ịgagharị webụ, dezie akwụkwọ na ịkpọ vidiyo na nke a bụ ihe ị ga-atụ anya iji ya mee.
Laptọọpụ VS akwụkwọ ndetu
Mgbe ị na-achọ laptọọpụ, ị nwere ike iche nsogbu dị n'ịzụta laptọọpụ ọdịnala ma ọ bụ akwụkwọ ndetu. N'okpuru ị ga-ahụ tebụl ntụnyere uru na ọghọm nke nke ọ bụla n'ime ha ga-enyere gị aka ime mkpebi ahụ.
[table id = akwụkwọ ndetu /]
Ihe ndị ọzọ gbasara akwụkwọ ndetu
Ọsọ abụghị ihe niile
A bịa na arụmọrụ, ọtụtụ akwụkwọ ndetu dị ọnụ ala anaghị adị ngwa ngwa. Nke a bụ n'ihi emebere ya na arụmọrụ ike n'uche karịa ọsọ. Nkeji ndị a nwere arụmọrụ dị mkpa iji jikwaa ọrụ mgbako kachasị dị mkpa, dị ka ihe nchọgharị weebụ, njikwa email, nhazi ederede, mpempe akwụkwọ na ndezi foto bụ isi.
Ọ bụ ya mere a na-akpọkarị ha dị ka ngwaọrụ ịntanetị ma ọ bụ nyiwe ngagharị. N'ikwu eziokwu, iji rụọ ụdị ọrụ ndị a ị gaghị achọ nnukwu ọsọ. Ọtụtụ akwụkwọ ndetu na ahịa na-eji Intel Atom ma ọ bụ Celeron processors, n'agbanyeghị na enwere ụfọdụ ndị na-eji Ndị nhazi VIA.
Ebee ka CD dị?
Ebe ọ bụ na njirimara ya dị oke ma na-akwụ ụgwọ bụ isi ihe, ọnụ ọgụgụ njirimara nke akwụkwọ ndetu dị ọnụ ala gụnyere dịkwa obere karịa ihe ị ga-ahụ na akwụkwọ ndetu omenala ma ọ bụ ọbụna Ultrabook. Ngwa dị ka draịva CD/DVD adịghị mkpa ma mee ka ngwaahịa ahụ dịkwuo ọnụ. Site na ikpochapụ ha, ndị na-emepụta nwere ike ibelata ibu, nha, na ike oriri.
Agbanyeghị, nke ahụ na-emekwa ka ọ ghara ikwe omume maka ọtụtụ ndị ọrụ iji akwụkwọ ndetu dochie PC ha na-agbakwunyeghị akụkụ ndị ọzọ, dị ka draịva mpụga.
Hard Drive ma ọ bụ SSD?
Ọtụtụ akwụkwọ ndetu dị ọnụ ala na-eji SSD ma ọ bụ flash draịva kama draịvụ ike ọdịnala. Nke a, ọzọ, na-enye aka n'ibelata mkpokọta ngwaọrụ ahụ, yana ike oriri ya. Nsogbu bụ na ibe ebe nchekwa nke nkeji ndị a na-eji dị oke ọnụ na, nke na-eme ka ohere nchekwa ahụ dị oke (mgbe ụfọdụ ọ na-ezughị ezu iji rụọ ọrụ na Windows XP) ma ọ bụ ọnụ ahịa ngwaọrụ na-agbago ma e jiri ya tụnyere a. ọkọlọtọ laptọọpụ. N'ihi nke a, ọtụtụ akwụkwọ ndetu agbanweela na draịva siri ike taa.
Ihuenyo na nha
Ihuenyo LCD nwere ike bụrụ ọnụ ahịa kacha akwụ ụgwọ maka ndị na-emepụta laptọọpụ. Iji belata ego na akwụkwọ ndetu ọnụ ala, ndị na-emepụta emepụtala ngwaọrụ nwere obere ihuenyo.. Akwụkwọ ndetu nke mbụ nwere ihuenyo inch asaa, mana kemgbe ahụ, ekele maka ya, ha etoola 10 sentimita asatọ, nha kachasị. N'oge na-adịbeghị anya ụdị nke laptọọpụ nwere obere ihuenyo, ma ọtụtụ n'ime ihe kacha mma Ha na-ala azụ ime nha ka ukwuu ebe ọ bụ na nke ahụ ga-eme ka ngwaahịa ahụ dịkwuo ọnụ ma ghara inwe ike ịsọ mpi na laptọọpụ ọdịnala.
Akwụkwọ ndetu na-adịkarị mfe nke ukwuu, nke na-eme ka ha dị mma maka ndị ọrụ ahụ chọrọ ịnwe njikọ netwọkụ mgbe ha na-eme njem iji rụọ ọrụ.. Agbanyeghị, obere nha a nwekwara ihe ndọghachi azụ: akwụkwọ ndetu dị warara ma igodo ha pere mpe karịa nke akwụkwọ ndetu. Obere igodo ndị a nwere ike ịka njọ maka ndị chọrọ pịnye ọtụtụ ma ọ bụ nwee nnukwu aka.
Software bụ nnukwu okwu ọzọ ma a bịa n'akwụkwọ ndetu. Windows Vista na-adịkarị arọ nke ukwuu maka ụdị ngwaike a ịkwado ya. N'ihi na, Microsoft wepụtara Windows XP Home maka akwụkwọ ndetu, n'agbanyeghị na ndị a ga-enwerịrị nkọwapụta. Ọ dabara nke ọma, nke a gbanwere mgbe a tọhapụrụ ụdị ọkụ ọkụ nke Windows 7 yana ọbịbịa nke Windows 10.
Buru n'uche na Microsoft emeela ezigbo ọrụ nke njikarịcha na ụdị kachasị ọhụrụ nke Windows 10 na anyị nwere ike ịhụ sistemụ arụmọrụ na-arụ ọrụ nke ọma ọbụlagodi na ngwaike dị ala dị ka netbook ndị a dị ọnụ ala.
N'ọnọdụ ọ bụla, ị kwesịrị ịma na ị na-azụta laptọọpụ dị mma ma dị ọnụ ala mana nwere njirimara dị ala nke ga-eji nwayọọ nwayọọ na-arụ ọrụ ndị dị arọ ma ka oge na-aga ga-aghọ ihe ochie karịa ndị ọzọ dị ike. N'ikpeazụ, ihe niile dabere na mkpa gị.
Ebumnuche nke akwụkwọ ndetu bụ ịdị ọnụ ala karịa laptọọpụ ọdịnala. Nke a bụ eziokwu n'ọnọdụ ụfọdụ, mana ọtụtụ akwụkwọ ndetu agbasawanyela njirimara ma ọ bụ ihe mejupụtara ya, na-eme ka ngwaahịa ahụ dịkwuo ọnụ. Ebum n'obi na ngwaọrụ ndị a ga-eri ihe dị ka euro 100, mana ugbu a, ha dị n'etiti 200 na 300 na ụfọdụ ụdị ọhụrụ gafere ha ruru 800. Ọnụ ahịa a na-etinye akwụkwọ ndetu ndị a ozugbo na-asọ mpi maka ego na laptọọpụ ọdịnala.
Mkpebi gbasara akwụkwọ ndetu ọnụ ala
Akwụkwọ ndetu na-enye ụfọdụ nnukwu uru, nke kachasị n'ime ya bụ nnukwu ibugharị. Nsogbu bụ na, iji nweta ya, ha ahapụla ọtụtụ atụmatụ ndị laptọọpụ ọkọlọtọ nwere. Nke a na-eme ka ha bụrụ ezigbo nhọrọ iji kwado kọmputa desktọpụ maka ndị niile chọrọ ngwaọrụ iji mee njem ma ọ bụ rụọ ọrụ n'èzí ụlọ. Ndị a bụ nnukwu ngwaọrụ netwọkụ maka ịchọgharị na ịntanetị ma ọ bụ ijikwa email gị, mana tupu i kpebie ịzụrụ, ị kwesịrị ịjụ onwe gị ajụjụ abụọ:
Ọ na-egbo mkpa m?
Adị m njikere ịchụ atụmatụ nke laptọọpụ buru ibu ma dị ọnụ karịa maka ibugharị?
Ọ bụrụ na azịza gị nye ajụjụ abụọ a bụ ee, mgbe ahụ akwụkwọ ndetu nwere ike bụrụ nnukwu nhọrọ maka gị.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Tipo » Akwụkwọ ndetu dị ọnụ ala